Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) | freedomfororomo
Beekan Guluma Erena: Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa)
Seenaan nafxanyootaa bara minilikii,bara Hayilesillaaseefi Dargii guyyaa guyyaaatti rakkina uumaa jiru; nutu caalaa nafxanyootaati malee maalummaafi seenaa Oromoo wajjin waan wal qabate miti. Har’as taanaan hololli nutu caalaa yookiin nafxanyoonni kun egaa har’a kan isaan barbaadan Itiyoophiyaa barbaadan dhaabbachuudha. Jarreen kun egaa Oromoos ta’e uummata kibbaa qabeenya isaanii malee isaaniin hinbarbaadan. Shirri nafxanyootaa kana qooqa ittiin ibsinutu nurakkisa. Yeroo Oromoon cunqursamee lafti isaa irraa fudhatamee aadaansaa wanjoo jala gale, akkasumas seenaa sobaa irratti fe’ame jalaa bilisa ba’uuf ofiikootiinan ofbulcha jedhee yeroonni ka’u, ‘Gaallaan maalta’eetu’ jedhanii arrabsoon mogolee isa buusu.
Biyya bulchuun nuuf kenname isinimmoo nujalatti bitamuudha; carraan keessani jechuun Waaqa wajjin walloluudha jechuun akka waan Oromoon Waaqa malee uumameetti soba guyyaa saafaa amantii isaaniin da’ate sanaan sammuu nu hadoochaa turaniiru. Itiyoopiyaan qomoo kanaan haabitamtuun seera Waaqarraa dhufe utuu ta’ee nutis warri lafattiirra jiraannu beekuu qabna turre. Kanaafuu jarreen warra nutu caalaa kanaaf goonkumaa hinmijatu. Ummanni bittaa kana jala jiru cunqursamuusaa akkanni hin hubanne gochuudhaan biyya,aadaafi afaan boonsaa utuu qabuu mataa buusee jiraachuusaa ilaalee dhalooti hincallisne hindhibamu. Ammas ta’e durattis qabsoo eenyummaa Oromootiif goototni qabsaa’an lakkoofsi bira hinga’u.
Baaroo Tumsaa sochii hedduu taasise cinatti bara 1964 aadde Warqinash Bultoo wajjin bultii ijaarrate. Aadde Warqinash Bultii biyya Eertiraa keessatti dirqama loltummaarra utuu jiranii bara 1982 loltoota amanamoo Mangistuu Haayilemaariyaamiin ajjeefamani. Aadde Warqinash Bultoo obboleettii jeneraal Demisee Bultoo yommuu ta’an, abbaan isaanii obbo Bultoo Ejersaammoo Waldaa Maccaafi Tuulamaa keessatti miseensa turani. Cidhi Baaroo Tumsaa Oromoota sadarkaa hojii adda addaarra bakka adda addaarra jiran hundaa biratti haala ho’aadhaan waan kabajameef diina biratti akka sochii siyaasaatti fudhatamee isaan sodaachisaa ture. Dargaggeessi lammiisaatiif akka guddaatti inaaffaa garbummaa hunkuteessuuf qabatee ka’e kun tarkaanfii diinaa kan itti caalchisaa deemeefi akka malee sodaachisee gara isa dhabamsiisuuf ka’ame sochii bara 1966 ka’e akkanni karaattti hafuuf gumaacha taasisera. Amma ammaatti saba Oromoo hedduu biratti akka gaariitti kan dubbifamuufi jaallatamu (The Oromos voice against tyranny document 1971) kan jedhu garee hojjetootasaa wajjin namoota hedduu bira akka ga’u taasiseera.
Har”a gaazeexaan Bariisaa faayidaa siyaasaatiif jedhamee kan qophaawu malee faayidaa eenyummaa saba Oromootiif jedhee miti. Baay’inaan waa’ee eenyummaa Oromoo irrattis kan hojjetaa jiru miti. Maqaa kana qabatee gaazexaan bahaa jiru garuu ammayyuu biyya Oromiyaa keessa jira. Qubee Afaan Oromoo har’a sabni Oromoo itti fayyadamu Baaroo Tumsaafi Hayilee Fidaafaatu bara lubbuun jiran qopheessani. Bara 1973 qabsoon Oromoo akka inni sadarkaa olaanaarra ga’uuf kaayyoo balla’aa baasuudhaan wiirtuu Qaama Qindoominaa yookaan ‘Central Coordinating Body’ dhaaba jedhu hundeesseera. Kunis immoo turee dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo jedhutti jijjiirameera.
*Beekan Guluma Erena
← Bedele Brewery cancels Teddy Afro’s Journey of Love Concer
በሃገር ማቅናት ስም የተፈጸሙ ግፎችን ይክዳሉ →
8 comments on “Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa)”
GEMMECHU on January 2, 2014 at 10:02 pm said:
guddaa galatoomi ammalle tanaan qubbesi kee seenaa fi dhugaa jiru baasutti hin qoorin garuu there is additional information by whom it dies as i read from but not specied ”qabsoon oroomo essa karam” by Tullu Goleetin….
Itana Guteta on January 2, 2014 at 11:08 pm said:
Eeyyee dhugaa dha kan hafee jiruu illee namni kana barreessee tessoo isaa gara dhumaarratti ibsee waan jiruuf utuu gaafattee odeeffannoo akka argaachuu dandeessuu shakkii hin qabu
KORSA NEGESA on March 5, 2014 at 7:32 pm said:
Seenaan ati dabarsite baay`ee kan namatti dhaga`amudha ayiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chala feyissa on April 12, 2014 at 4:24 am said:
Qalamni ha mirgisu dhugaa barreessuuf yoomuu jabaadhu!
Anonymous on April 30, 2014 at 6:22 am said:
SEENAAN KEE HIN BADIN HAA MIRGISU GOOTICHA OROMOO!
Anonymous on February 7, 2015 at 7:16 am said:
Qaroo koo/hidda koo/ sanyii kiyya baay’ee galatoomi, seenaa nama kanaa baruuf baay’een barbaadaa ture, garuu amma hunda isaa dubbisee, seenaa isaafii bu’ura inni oromoof kaa’e hubadheen jira. rabbi umurii kee haa dheeressu,jiraadhu dhiiga tiyya.
Anonymous on July 2, 2017 at 3:15 pm said:
Ijaa Oromo Biyyen Siti Haasaalphatu
Anonymous on November 18, 2017 at 10:19 am said:
Adaafi seena umaata oromoo akka kanatti dhagauu bayyeen gammadee jabaadha??
ARSI on Tokkummaa jechuun maal je…